फागुन १६, २०७४ BNNTV
काठमाडाै । पछिल्लाे समयमा युद्दकाे चरम सिमामा पुगेकाे सीरियाको राहत क्याम्पमा महिलाहरुको यौन शोषण भएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न संगठनको सहयोगमा राहत बाँड्न पुगेका पुरुष राहतकर्मीले महिलाहरुलाई यौन शोषण गरेका छन् ।
राहतकर्मीहरुले एकछाक भोजन उपलब्ध गराए वापत यौन प्यास मेट्ने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । देशको दक्षिण भागमा यो समस्या ब्यापक रूपमा पाइएकाे हाे । स्वयम राहतकर्मीले बीबीसीलाई दिएको जानकारीअनुसार महिलामाथीको यौन शोषण डरलाग्दो रुपमा भइरहेको छ । जसको कारण सिरियाली महिलाहरु राहत वितरण केन्द्रमा जान मानिरहेका छैनन् । एक राहतकर्मी दावी गर्दै भन्छन्, ‘केही मानवतावादी एजेन्सीले घटनालाई देखे पनि नदेखेजस्तो गरिरहेका छन् ।संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोषको मूल्याङ्कनमा यो पनि उल्लेख छ । मद्दत सामग्री दिने बहानामा महिलाको यौन शोषण भएको छ । संगठनले यो मूल्याङ्कन गएको वर्ष सिरियाको विभिन्न स्थानमा गरेको थियो ।
टार्गेटमा ‘विधुवा’ र ‘डिभाेर्स’ युवती
भ्वाइस फ्रम सीरिया २०१८ नामको यस रिपोर्टमा लैंगिक हिंसाको विश्लेषण गरिएको छ । जुन रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘महिला एवं युवतिहरुले अधिकारीहरुसँग केही समयका लागि बिहे गरेका छन् । उनीहरुको विवाहको उद्देश्य हुन्छ पेटभरि खान पाइयोस् । त्यसको बदलामा अधिकारीहरु यौन प्यास मेट्छन् ।’
रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार राहतकर्मीहरु महिलाको फोन नम्बर माग्छन् र घरमै पुग्छन् । पति गुमाएका एकल महिला र सम्बन्ध बिच्छेद भएका महिलाहरु उनीहरुको निशानामा पर्ने गरेका छन् । यस किसिमको घटना तीन वर्ष पहिला पनि सार्वजनिक भएको थियो । तर, फेरि पछिल्लो रिपोर्ट बाहिर आएको छ ।सहयोगी संस्थाका लागि सल्लाहकारको काम गरिरहेको डेेनिएल स्पेन्सरले २०१५ मा जोर्डनका केही सीरियाली महिला समूहले यस विषयमा गुनासो गरेको उल्लेख छ ।सहयोगी संस्थाले भनेका छन्, ‘ति पुरुषहरु राहत सामग्री तबसम्म रोकेर राख्छन् जबसम्म महिलाहरु यौनकार्यका लागि तयार हुँदैनन् । एक महिला आफ्नो कोठामा निकै रोएकी थिइन्, सुन्दा निकै नरमाइलो लाग्यो ।’ त्यसो त महिलालाई राहत उपलब्ध गराउदा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
४० प्रतिशत महिला यौन हिंसाको शिकार
द इन्टरनेशन रेस्क्यु कमिटीले यस किसिमको सर्भे जुन २०१५ मा सार्वजनिक गरेको थियो जहाँ १९० महिला एवं युवति सहभागी थिए । रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार ४० प्रतिशत महिलाले यौन हिंसाको शिकार भएको बताएका छन् । कमिटीका प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘सर्भेको निष्कर्षअनुसार दक्षिण सिरियामा यौन हिंसा व्यापक चिन्ताको विषय बनेको छ । जहाँ राहत सामग्रीको बदलामा यौन शोषण गरिन्छ ।’
बीबीसीले यस रिपोर्टलाई १५ जुलाई २०१५ को संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोषको बैठकमा पेश गरेको थियो । जोर्डनको राजधानी अम्मानमा भएको यस बैठकमा संयुक्त राष्ट्र एवं अन्तराष्ट्रिय संगठनले सहभागीता जनाएका थिए ।
द इन्टरनेशनल रेस्क्यु कमिटीका प्रवक्ताका अनुसार दक्षिणी सिरियामा महिला एवं युवतिको सुरक्षाका लागि अब केही नयाँ कार्यक्रम सुरु हुने छ ।
केयर संस्थाले सीरियाको निगरानी टिम विस्तार गर्नुको साथै राहत सामग्री स्थानीय एजेन्सीलाई दिन बन्द गरेको छ । राहत दिने यस्ता संस्थाहरु भने मौन रहने गरेका छन् ।
२०१५ मा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषको बैठकमा यो रिपोर्ट पेश गरिएको थियो । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघले भने कुनै कारवाही गरेन ।
प्रकाशित : बुधबार, फागुन १६, २०७४११:४६
चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको निधनबारे चुलियो यस्तो विवाद : आखिर उनको हत्या की मृत्यु ?
संचालनमा आएको केही दिनमानै बन्द भयो कलंकीको ऐतिहासिक अण्डरपास !
वाइड बडी जहाजले दैनिक १६ घण्टा उडान भर्ने !
खोलाले बगाउँदा एक जनाको मृत्यु !
बिग्रिएका कवाडी सामग्री फाल्नुहुन्छ? त्यसो भए विश्वकै ठूलो मूर्ति बनाउन गर्नुहोस सहयोग